Guddiyada doorashooyinka & xalinta khilaafaadka oo tababarkii loo soo xiray – Radio Daljir
Luulyo 3, 2021 6:12 g 0
Wasiiru-dowlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Cabdixakiin Xasan Ashkir ayaa soo xiray tababar muddo Saddex cisho ah u socday Guddiyada Doorashooyinka heer federaal, heer dowlad-goboleed iyo xallinta khilaafaadka.
Xubnaha Gudiyadaan oo ka kala socda dowladda Soomaaliya, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa 30-kii Bishii June waxaa tababarka u furay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble.
Wasiiru-dowlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Cabdixakiin Xasan Ashkir ayaa sheegay in Guddiyada doorashooyinka & xalinta khilafaadka tababarkooda ay bixinayeen dad khubaro ah, isla markaana ay ka faa’iideysteen.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in guddiyada doorashada ay siweyn uga doodeen jadwalka doorashada iyo inay muuqaal guud ka diyaariyeen maaliyadda iyo Anshaxa doorashooyinka.
Wasiiru-dowlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Cabdixakiin Xasan Ashkir ayaa ayaa ugu dambeyn sheegay in Guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ay aad uga doodeen, hufnaanta, daah-furnaanta doorashada, isaga oo sheegay in looga baahan yahay inay si cadalaad ah u shaqeeyaan.
Xubnaha Guddiyada Doorashooyinka heer federaal, heer dowlad-goboleed iyo xallinta khilaafaadka ayaa waxaa la filayaa inay dhawaan ay guda galaan howlaha doorashooyinka ee loo igmaday, iyada oo shaqadooda ay ku egtahay in laga dooranayo madaxweynaha